सरकारको गतिविधिमा अधिनायकवादको छाया“ देखियो’ – MeroJilla.com
नेपाली का“ग्रेसका शिर्ष नेताहरुले वर्तमान सरकारको काम गर्ने शैली र गतिविधिमा अधिनायकवाद छाया“ देखिएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारको यहि प्रबृत्ति जारी रहे का“ग्रेस र आमनागरिकलाई सह्यि नहुने बताएका छन् ।
नेपाली का“ग्रेस स्याङ्जाका सभापति कमलप्रसाद पंगेनीको स्वर्गारोहण भएको १३ औं दिनको पुन्यतिथीमा स्याङ्जामा आयोजित विराट श्रद्धान्जलीलाई सम्बोधन गर्दै शिर्ष नेताहरुले सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी गतिविधि गरेकाले अधिनायकवादको छाया“ देखिएको बताएका हुन् ।
“सरकार निमुखीलाई न्याय र विपन्नलाई आय दिनुको सट्टा दुईतिहाईको बल छ भनेर जनविरोधी काम गरेको छ ।” श्रद्धान्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै का“ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, “न्याय र आय दिनुपर्ने बेला जनालाई सरकारले सास्ती दिएको छ ।” सरकारको कार्यशैलीमा दम्ब हावी भएको उनको दाबी थियो ।
लोकतन्त्रमा बृहत्तर निर्णय लिनुपर्दा एकता र छलफलबाट लिने परम्परा भएको जिकिर गर्दै नेता पौडेलले भने, “सरकार एकलौटी र दम्बकारी बनेर अगाडी बढेको छ ।” सरकार आमनागरिकको साझा बन्न नसकेको चिन्ता व्यक्त गर्दै नेता पौडेलले भने, “सरकार आमनागरिकको हो भन्ने अनुभूति नदिएर एउटा दल मात्रैको हो भन्ने सन्देश दिइएको छ ।”
श्रद्धान्जली सभामा का“ग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले लोकतन्त्रमा सादा जीवनयापन गरेर नागरिकको सेवा गर्ने हो, तर हाम्रो देशमा नेताले सेवा र मेवा पु¥याएपछि मात्रै लोकतन्त्र बलियो छ भन्ने भावनले बढवा पाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
“सादगी जीवन जियर नागरिकको सेवा गर्न सकेमात्रै लोकतन्त्र मुलमर्म पुरा हुन्छ ।” महामन्त्री खड्काले भने, “हाम्रोमा नेता उनका परिवार र आसेपासको व्यवस्थापन गर्नु लोकतन्त्रको मुलमर्म ठानियो ।” यस्तो प्रचलनले हामीलाई धेरै टाढा जान नदिने भएकाले समयमै सचेत बनेर नागरिकको सेवामा लाग्न सबैमा उनले आग्रह गरे ।
सभामा का“ग्रेस सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पंगेनीले जीवनमा आफ्नो न घर, न एक पैसा आफ्ना नाममा जम्मा नगरे राजनीति गरेको बताए । नागरिकको सेवा समर्पित पंगेनीले जीवनभर परिवारलाई समेत आवश्यक समय नदिएको बताए ।
श्रद्धान्जली सभामा का“ग्रेस केन्द्रिय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खा“ण, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिह के.सी., दिलबहादुर घर्ति, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ्, सुरेन्द्र पाण्डेले लोकतान्त्रिक चरित्र अनुसार विकासमा आफूलाई सर्मपण गरेका पंगेनीबाट नेपाली राजनीतिक अग्रज र भावि पुस्ता धेरै सिक्नुपर्ने बताए ।
का“ग्रेस नेतृ डिला संगा्रैला नेताहरु यज्ञबहादुर थापा, रामहरि खतिवडा, धु्रब वाग्ले, शारदा पौडेल, नेपाल महिला संघका कार्यबहाक अध्यक्ष सरस्वती तिवारी, नेपाल शिक्षक संघका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष भरतप्रसाद लम्सालले स्वर्गिय पंगेनीप्रति सद्धासुमन व्यक्त गरे ।
का“ग्रेस स्याङ्जाका सचिव कुमार रानाको अध्यक्षतामा भएको श्रद्धान्जली सभाको संचालन प्रबक्त ईन्द्रबहादुर गोदारले गरेको थिए भने स्वागत कोषाध्यक्ष प्रेमराज पौडेलले गरेका थिए । सभामा पंगेनीको राजनीतिक यात्रा र जीवनका बारेमा पूर्व सभापति खगेन्द्रराज रेग्मी तथा पंगेनीका दाजु लिलाराज पंगेनीले प्रष्ट पारेका थिए ।
नेपाली का“ग्रेस स्याङ्जाका सभापति कमलप्रसाद पंगेनीको साउन २० गते ह्दयघात भएर ५६ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । ३ पटक पार्टी सभापति र संविधानसभाका सदस्य बनेका पंगेनीका एक श्रीमती एक छोरा र एक छोरी छन् ।